Odd Squad the movie 2016 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
ဒီဇာတ်ကားလေးဟာဆိုရင် IMDb 7.3 အထိရရှိထားတဲ့ လူငယ်ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာဆိုရင် Odd Squadဆိုတဲ့ လူငယ်အဖွဲ့ဟာ လက်စားချေလိုတဲ့ Weird Teamအဖွဲ့ကြောင့် ပြိုကွဲသွားခဲ့ရပါတယ်။Weird Team အဖွဲ့ဟာဆိုရင် စက်ကိရိယာတစ်မျိုးတည်းသာသုံးပီး လူတွေရဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံကို ချက်ချင်းပဲ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့လို့ အချိန်ယူဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ Odd Squadအဖွဲ့ထက် လူအများရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။Odd Squad အဖွဲ့ပြိုလဲသွားပီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Odd Squad အေးဂျင့်တွေက Weird အဖွဲ့ရဲ့ နောက်ကွယ်က အမှန်တရားကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ Weirdအဖွဲ့ဟာ ပြဿနာတွေကို တကယ်မဖြေရှင်းနိုင်ပဲ လူတွေရဲ့အမြင်ကို ယာယီပုံရိပ်ယောင်လုပ်ပီး လှည့်စားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲ ရှိသမျှပစ္စည်းပေါင်းစုံကို ကိုက်စားတတ်တဲ့ Dave လို့ခေါ်တဲ့ အကောင်လေးတွေက နာရီတိုင်းမှာ ၂ဆပွားလာခဲ့ပါတယ်။Weird အဖွဲ့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ဌာနချုပ်မှာ Daveတွေ ရှိမှန်းမသိခဲ့ပဲ နာရီတိုင်း အကောင်ရေများစွာ ပွားနေခဲ့ပါတယ်။Odd Squad ဟာ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားရင်းကနေ Daveတွေကြောင့် ကမ္ဘာကြီးပျက်စီးတော့မှာကို သိလာခဲ့ပါတော့တယ်။Odd Squad အေးဂျင့်တွေက Daveတွေကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ နှိမ်နင်းပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်နိုင်မလဲ၊ Weird အဖွဲ့နဲ့ရော ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ဆက်လက် ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်။
Translated & Review by Su Lay
Large size ( 700 mb )
Small size ( 350 mb )
Stratton ( 2017 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
IMDb rating 4.9 ရထားတဲ့အက်​ရှင်ကားကောင်းလေးပါအရမ်းစိတ်​ဝင်​စားစရာ​ကောင်းပြီး အရမ်းကြမ်းတဲ့ အက်​ရှင်​ကားသစ်​​လေး တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​ရေတပ်​မှာ စစ်​သား​တွေအဖြစ်​လုပ်​ကြတဲ့ သူ​တွေထဲက နှစ်​​ယောက်​ဟာ တစ်​​နေ့မှာ လုပ်​ငန်း​ဆောင်​ရွက်​​နေတုန်း လူဆိုးဂိုဏ်း​တွေနဲ့ အပြန်​အလှန်​ပစ်​ခတ်​ကြရာမှ သူငယ်​ချင်းတစ်​​ယောက်​ကို ဆုံးရှူံးခဲ့ပါတယ်​သူဟာ ဝမ်းနဲလို့ အငြိမ်းစားယူ​တော့ လက်​စား​ချေဖို့ကိစ္စတစ်​ခုပြန်​​ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်​ Londonမြို့တစ်​မြို့လုံးကို drone၃လုံး​ပေါ်က​နေ အဆိပ်​​တွေ ချဲမဲ့သူဟာလည်း သမ္မတမဖြစ်​လို့ ပြန်​လည်​လက်​စား​ချေတဲ့သူ ဖြစ်​​နေပါတယ်​လက်​စား​ချေမဲ့နှစ်​​ယောက်​ တစ်​ပြိုင်​ထဲ ​တွေ့ကြ​တော့ ကြမ်းတမ်းချက်​​တွေက ဒီကားကိုအက်​ရှင်​ကား​ကောင်းတစ်​ကားလို့ ​သတ်​မှတ်​​စေခဲ့တာပါNeed for speedထဲမှာ သိခဲ့တဲ့ Dominic Copperက ​ခေါင်း​ဆောင်​ပါဝင်​ထားပြီး Harry Potter Franchiseထဲက Mcfoy​ချော​လေး Tom Felton ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပြီး နာမည်​​ကျော်​ဒါရိုက်​တာကြီး Simon Westရိုက်​ကူးထားတာဖြစ်​ပါတယ်​
Translated & Review by Min Thwin Khant
Large size ( 800 mb )
Small size ( 400 mb )
Tangled the Series 2017 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Tangled ရုပ်ရှင်လေးအပြီးမှာတော့ series လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် First season ၆ပိုင်းလုံးပါ
series ၆ပိုင်းလုံးမှာ "ရပန်ဇယ်"မင်းသမီးလေးရဲ့မှော်ဆန်ဆန်ဆံပင်လေးရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရယ်
လူဆိုးလူမိုက် ယူဂျင်းတစ်ယောက် နန်းတော်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပုံလေးတွေ
"စထရောင်းဘိုး" ထောင်ကလွတ်လာတဲ့အခါ သူတို့တူတူ ဓားပြတိုက်ခဲ့ကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကို
Translated by Wai Mar, Mon Lay, Thiri, Phumon
Tangled Before Ever After 2017 (မြန်မာစာတန်းထိုး)
ဒီကာတွန်းကားလေးမှာဆိုရင် Disney ကနေ မင်းသမီးဇာတ်လမ်းလေးတွေထဲမှာမှ
ပြန်လည် ဆန်းသစ်ပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်..
မိဘတွေဆီကနေ ခိုးယူခံလိုက်ရတဲ့ မင်းသမီးလေးဟာ
ဆယ့်ရှစ်နှစ်လောက်ကြာမှ မိဘတွေဆီ ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်..
အဲ့ဒီ့နောက်မှာ သူမရဲ့ဘ၀အသစ်ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ဘ၀ကို
နန်းတက်ပွဲနီးလာတဲ့အခါမှာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရောက်လာအောင်
ကြိုးစားနေခဲ့တယ်...သူမရဲ့ တာဝန်တွေ နန်းတွင်း ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့
တစ်ဖြည်းဖြည်း နစ်မြုပ်လာတဲ့ အခါမှာ သူ့မရဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေအတွက်
နန်းတော် တံတိုင်းကြီးရဲ့ အပြင်ဘက်ကို ထွက်သွားနိုင်အောင် ကြိုးစားချင်ခဲ့တယ်..
သူမရဲ့ အဖေ ဘုရင်ကြီးကတော့ မင်းသမီးလေးရဲ့ လုံခြုံ ရေးအတွက်
မင်းသမီးလေး ဆန္ဒတွေကို ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့တယ်..
သူမရဲ့ သစ္စာအရှိဆုံး လက်တွဲဖော်ဖြစ်တဲ့ ယူဂျင်းကလည်း လက်ထပ်ဖို့ မစောင့်နိုင်တဲ့အတွက်
သူမရဲ့ သံသယတွေကိုက ပိုဆိုးလာပြီး ဘယ်သူမှ ဝေမျှ မခံစားပေးနိုင်တော့ဘူးလို့
သူမထင်လာတဲ့ အခါ သူမရဲ့ ရံရွေတော်မိန်းမပျိုလေးနဲ့အတူ ညသန်းခေါင် ခရီးတစ်ခု ထွက်ဖို့
စီစဉ်ခဲ့ပြီး မင်းသမီးလေးဟာ အရမ်းကို ထူးခြားတဲ့ ဘယ်လို ဖြစ်ရပ်တွေဆက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ဆက်ပြီး ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်
Translated & Review by Mon Lay
Quality 720p Download ( 600 mb )
Download ( 220 mb ) Read more »
Burn-E (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Wall-E တစ်ယောက် Eve နောက်လိုက်ရင်း အာကာသထဲက ယာဉ်ပျံကြီးဆီ ရောက်သွားတာ ပရိသတ်များ မှတ်မိကြပါဦးမယ်။ အဲဒီမှာ Wall-E ကြောင့် ယာဉ်ပျံကြီးရဲ့အပြင်ဖက်မှာ ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာတွေကို ပြန်ပြင်ပေးတဲ့ Burn-E ရဲ့ ကမောက်ကမ အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ short animation လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Wall-E တို့ အာကာသထဲမှာ သောင်းကျန်းနေလို့ Burn-E လေးတစ်ယောက် ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နေရသလဲဆိုတာ ကြည့်ရင်း ပိတ်ရက်ကလေးမှာ အပန်းဖြေလိုက်ကြပါဦးနော်။
Review & Encode by: Waiyan Philip
ဒီနေ့ ရုပ်ရှင်အကြိုကဏ္ဍအတွက်တော့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုကြည့်ရမယ့် အမေရိကန်စိတ်ကူးယဉ် သိပ္ပံဇာတ်ကားသစ်လေး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ ဒန်နီ ယက်အက်စ်ပင်နိုဆာရဲ့ လက်ရာဖြစ်ပြီး ကိုလံဘီယာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကနေ ဖြန့်ချိမယ့် ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။
အာကာသယာဉ်မှူးတွေဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာဒေးဗစ်ဂျော်ဒန်၊ မီရန်ဒါဘရက်နဲ့ ရိုရီရိုင်းအဒမ်တို့ အပါအဝင် အာကာသယာဉ်မှူး ခြောက်ဦးဟာ မားစ်ဂြိုဟ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သုတေသနပြုလုပ်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနလုပ်ရင်းနဲ့ သမိုင်းကြောင်းမှာ ပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအဖြစ် မားစ်ဂြိုဟ်ပေါ်က ထူးဆန်းတဲ့ သက်ရှိအရာတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ သက်ရှိကို စူးစမ်းမှုတွေ ဆက်လုပ်ကြရင်း အံ့ဩစရာ ကောင်းလောက်အောင်ကို တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားရှင်သန်လာသလို အသိဉာဏ်လည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုပါ တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
သုတေသီတွေဟာ ကမ္ဘာကျော်မယ့် ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အပေါ် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့်လည်း သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သူတို့ရဲ့ အပျော်တွေဟာ ဆန့်ကျင်ဘက် ခံစားမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲကုန်ပါတော့တယ်။ သူတို့စမ်းသပ်နေတဲ့ ဂြိုဟ်သားဟာ အစပိုင်းမှာတော့ အန္တရာယ်မရှိသယောင်ဖြစ်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ အာကာသယာဉ်မှူးတစ်ဦးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ထိတ်လန့်စရာ သတ္တဝါအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာ သူတို့စမ်းသပ်ထားတဲ့ ဂြိုဟ်သားကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းရှာတွေ့ဖို့က ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကို မပြန်ခင်မှာ အရေးတကြီးလိုအပ်လာပါတော့တယ်။ အာကာသယာဉ်မှူးတွေ တွေ့ခဲ့ တဲ့ သက်ရှိက ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲ။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်အထိပါလာပြီး ဒုက္ခမပေးဖို့အတွက် သုတေသီတွေ နည်းလမ်းရှာတွေ့ပါ့မလား ဆိုတာတော့ ရင်တဖိုဖိုနဲ့သာကြည့်လိုက်ဦးနော်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်ထားသူတွေက ဒေါက်တာဒေးဗစ်ဂျော်ဒန်အဖြစ် ဂျိတ်ခ်ဂျီလင်ဟောလ်၊ မီရန်ဒါဘရက်အဖြစ် ရီဘက်ကာဖာဂူဆန်၊ ရိုရီရွိုင်းအဒမ်အဖြစ် ရိုင်ယန်ရေးနိုး စသူတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
review by www.7Daynew.com
translate by Min Thwin Khant
Size - 677mb
မင်းသားကြီး နီကိုးလပ်​စ်​​ကေ့ခ်ျ​ရဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်​ ​နောက်​ဆုံးထွက်​ ကားသစ်​တစ်​ကားဖြစ်​တဲ့ Vengeance ofalove story ဇာတ်​ကားဟာဆိုရင်​​တော့ IMDB 5.3 သာရခဲ့​ပေမယ့်​ တကယ့်​ကို လက်​မလွတ်​တမ်းကြည့်​ရှုသင့်​တဲ့ ကား​ကောင်းတစ်​ကားပါ
အရင်​ကားများနဲ့မတူ ယခုကားမှာ​တော့ ယ​နေ့ကမ္ဘာမှာ ​နေ့စဉ်​ဖြစ်​ပွားလျက်​ရှိတဲ့ ဥပ​ဒေရဲ့ လစ်​ဟာခြင်း၊ တရားမျှတမှုအ​ပေါ် လျစ်​လျူရှုခံရခြင်း တို့အ​ပေါ် အ​ခြေခံပြီး ဇာတ်​အိမ်​တည်​ထားပါတယ်​
စုံ​ထောက်​အရာရှိတစ်​ဦးဖြစ်​သူ ဂျွန်​ (နီကိုးလပ်​စ်​​ကေ့ခ်ျ)ဟာ ဂုဏ်​ပြုဆုတံဆိပ်​အများအပြားရရှိထားတဲ့ ဥပ​ဒေဘက်​​တော်​သားတစ်​ဦးပါ
တစ်​​ညမှာ​တော့ တီနာမက်​ဂွိုင်းယား အမည်​ရှိ အမျိုးသမီးတစ်​ဦးဟာ သူမရဲ့ ၁၂ နှစ်​အရွယ်​ သမီးငယ်​နဲ့အတူ လွတ်​လပ်​​ရေး​နေ့ ပါတီပွဲတစ်​ခုမှ အိမ်​အပြန်​ ဖြတ်​လမ်းအဖြစ်​ ပန်းခြံထဲက​နေ ဖြတ်​သွားခဲ့ပါတယ်​
ပျော်​​ရွှင်​ခြင်း​တွေနဲ့ အိမ်​ပြန်​လမ်းကို အတူတူလှမ်းလာခဲ့တဲ့ သားအမိနှစ်​​ယောက်​ ပန်းခြံထဲအ​ရောက်​မှာ​တော့ ကြမ္မာငင်​ပြီး လူရမ်းကားတစ်​စုနဲ့​တွေ့ခဲ့ရပါ​တော့တယ်​
သမီးငယ်​ရဲ့ ​ရှေ့​မှောက်​မှာပဲ အနိုင်​ကျင့်​စော်​ကားခံခဲ့ရပြီး ​သေလု​မျောပါးဒဏ်​ရာ​တွေနဲ့ ​မေ့​မျော​နေခဲ့ပါတယ်​
မိခင်​ဖြစ်​သူအတွက်​ အကူအညီ​တောင်းရန်​အလို့ငှါ ညအ​မှောင်​အလယ်​ တစ်​​ယောက်​တည်း ထွက်​လာခဲ့တဲ့ သမီးငယ်​​လေး ဘတ်​သီမက်​ဂွိုင်းယားတစ်​​ယောက်​ တာဝန်​ကျရာအရပ်​ကို ထွက်​လာတဲ့ စုံ​ထောက်​အရာရှိ ဂျွန်​နဲ့​တွေ့ခဲ့ရာမှာ​တော့......
စိတ်​ပိုင်းဆိုင်​ရာ ရုပ်​ပိုင်းဆိုင်​ရာ ထိခိုက်​မှုများစွာနဲ့ နာလန်​မထူနိုင်​​တော့တဲ့ ကျူးလွန်​ခံရသူ တီနာ၊ အရွယ်​နဲ့မလိုက်​​အောင်​ ရဲရင့်​ပြီး သိတတ်​လိမ္မာတဲ့ သမီးငယ်​​လေး ဘတ်​သီ၊ မုဒိမ်းမှု၊ အသက်​​သေ​လောက်​သည်​အထိ ထိခိုက်​နာကျင်​​စေမှုတို့နဲ့ တရားစွဲခံထားရတဲ့ သားနှစ်​​ယောက်​အတွက်​ အိမ်​ကိုပါ ငှါးရမ်းခအဖြစ်​ ချ​ပေးပြီး အ​ကောင်းဆုံး​သော ​ရှေ့​နေကို ငှါး​ပေးချင်​တဲ့ အာမာဖစ်​၊ ဥပ​ဒေကို လက်​တစ်​လုံးခြားလုပ်​ပြီး ပညာသားပါပါနဲ့ တရားခံကိုလွတ်​​အောင်​ တရားလိုကို အပြစ်​ဖြစ်​​အောင်​ တရားမျှတမှုကို မျက်​ကွယ်​ပြု၊ အလုပ်​သ​ဘောနဲ့ ​ငွေ​ကြေးကိုသာ ​ရှေ့ရှုသူ ​ရှေ့​နေ​ကျော်​ကြီး ပတ်​ထရစ်​၊ ခရီးသွားလုပ်​ငန်းကိုသာ အားထား​နေရတဲ့ မြို့​လေးအတွက်​ အကျိုးမယုတ်​​စေရန်​အလို့ငှါ အမှုကို ပလပ်​​စေချင်​တဲ့ တာဝန်​ရှိသူ​တွေ၊
တရားမျှတမှုနဲ့ ဥပ​ဒေ၊ လူဆိုးနဲ့ လူ​ကောင်း၊ ကျူးလွန်​သူနဲ့ နစ်​နာသူတို့ရဲ့ အားပြိုင်​မှု​တွေ ပြင်းထန်​လာချိန်​၊ အမှန်​တရားက မ​ကောင်းမှုထံ အညံ့ခံရ​တော့မယ့်​ အချိန်​မှာ​တော့......
အမှန်​တရားကို လိုလားသူ စုံ​ထောက်​ကြီး ဂျွန်​တစ်​​ယောက်​ တရားမျှတမှုကို မည်​သို့​သော နည်းလမ်း​တွေနဲ့ ​ဆောင်​ကြဉ်း​ပေးနိုင်​မှာလဲ ဆိုတာကို​ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်းတိုင်း ဇာတ်​ကား​ကောင်းတိုင်းကို လက်​မလွတ်​တမ်း ကြည့်​ရှုခံစားလိုသူ ချစ်​​ပရိသတ်​ကြီးအတွက်​ Gold Channel မှ အ​ကောင်းဆုံး​သော အရည်​အ​သွေးဖြင့်​ အပင်​ပန်းခံ တင်​ဆက်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ ခင်​ဗျာ
Translated & Review by hTaG
Large size ( 700 mb ) Small size ( 400 mb ) Read more »
Ghosthunters on Icy Trails (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
IMDb rating 5.5 ရထားတဲ့ဟာသကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ
ဘာမဆို ​ကြောက်​တတ်​တဲ့ ​ကောင်​​လေးတစ်​​ယောက်​ဟာ မိဘ​တွေခိုင်းလို့ ​မြေ​အောက်​ခန်းမှာ ဝိုင်​ပုလင်းသွားယူ​နေတုန်း အစိမ်း​ရောင်​ ပျစ်​ချွဲချွဲ​အရည်​​တွေနဲ့ ဂျယ်​လီပုံစံ သရဲတစ်​​ကောင်​နဲ့​တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်​
အစက​တော့ ​သေမတတ်​​ကြောက်​ခဲ့​ပေမဲ့ သရဲက ​သူနဲ့သူငယ်​ချင်းဖြစ်​ချင်​​နေတာ​ကြောင့်​ မ​ကြောက်​​တော့ပါဘူး အဲ့သရဲကို အစပိုင်းမှာနှိမ်​နှင်းဖို့ လျို့ဝှက်​သရဲဖမ်းအဖွဲ့စည်းက​နေ တစ်​​လောကမှ အလုပ်​ဖြုတ်​ခံလိုက်​ရတဲ့ သရဲဖမ်းသူနဲ့သွား​တွေ့ပြီး အကူအညီ​တောင်းခဲ့ပါတယ်​
၁၁နှစ်​အရွယ်​က​လေး ဖြစ်​​နေ​တာ​ကြောင့်​ သူ့ကိုဘယ်​သူမှမယုံတာကခက်​​နေတာပါ ဒါ​ကြောင့်​ သူဟာ တစ်​​ယောက်​ထဲစွန့်​စားခန်းဖွင့်​ပြီး သက်​​သေပြနိုင်​ခဲ့တယ်​
သူတို့မြို့ကြီးဟာ ​နွေရာသီအလယ်​မှာ​ရောက်​​နေ​ပေမဲ့ တစ်​ဖြည်းဖြည်း​အေးလာပြီး နှင်း​တွေလဲ ကျ​နေပါတယ်​ အ​ကြောင်းက​တော့ လွန်​ခဲ့တဲ့ နှစ်​​ပေါင်းများစွာက အိပ်​​ပျော်​ခဲ့တဲ့ ​ရေခဲနှင်းသရဲဟာ ပြန်​လည်​နိုးထလာလို့ပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​
ဘယ်​လိုမျိုး နည်းလမ်း​တွေနဲ့ အနိုင်​ယူသွားမလဲဆိုတာ​တော့ ​စောင့်​ကြည့်​လိုက်​ပါဦး​ဗျာ
Kidnap 2017 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Karla Dyson ဟာသူ့ရဲ့သားလေးဖြစ်သူ Frankie နဲ့အတူနစ်ယောက်ထဲ
Translated by Linnthura1988
Review & Encoded by Lwin Naung
Small size ( 400 mb ) Read more »
Below Her Mouth (2016) (မြန်မာစာတန်းထိုး) 18+
ဒီကားလေးကတော့ 18+ ဆိုပင်မဲ့ drama ကားလေးပါ
IMDb 5.6 တောင်ရထားတာပါ
ကိုသွားလည်ရင်း ဒယ်လန် နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပီးတော့ချစ်ကြိုက်မိသွားခဲ့ပါတယ်
တွေခြားမှာ ဂျက်စမင်း ဟာ ဒယ်လန် ကိုရွေးချယ်မလား ဒါမှမဟုတ်
သူမလက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ချစ်သူ ရိုင်း ကိုဘဲရွေးချယ်မလား
Review & Translated & Encoded by Lwin Naung
Large size ( 650 mb )
John Wick2( မြန်မာစာတန်းထိုး )
John Wick2ပါအရင်ကားလိုမျိုးဘဲအကြမ်းအတမ်းဖက်ရှင်ခန်းတွေနဲ့
Legendary Hitman ကြီး John Wick တစ်ယောက်လူသတ်သမား
အတိုင်း Rome ကိုသွားပီးတော့ ဆရာ့ ဆရာကြီး တစ်ယောက်ကို
Large size ( 850 mb )
Small size ( 500 mb )
Kill'em All 2017 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
မင်းသားကြီး ဗန်ဒိန်း ရဲ့ ၂၀၁၇ ထွက်ကားသစ်လေးပါ
ဗန်ဒိန်း ရဲ့ကားတွေထုံးစံအတိုင်း တိုက်ခိုက်ခန်းတွေကို
ရောက်လာခဲ့ပါတယ် သေခါနီးအခြေအနေနဲ့ပေါ့ နိုင်ငံခြား
ပတ်သတ်ပီး FBI ကစစ်ဆေးနေခဲ့ပါတယ်
Lagre size ( 700 mb )
IMDb 6.1 အထိရထားတဲ့ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ အဖေရယ် သမီးရယ် သားရယ် ၃ယောကထဲနေတဲ့အိမ်ကို ဘယ်ကမှန်းမသိ ရောက်လာတဲ့ လူပုငလကမလေးတစ်ကောင်က ခိုးဝင်လာပါတယ် အဲ့ငလက်မလေးရဲ့အစွမ်းက အသက်ရှိတဲ့အရာကို ကျောက်ရုပ်လုပ်ပေးတာပါပဲ သူဟာ ကြောင်တစ်ကောင်ကို ကျောက်ရုပ်ထုလုပ်မိသွားပါတယ် နောက်တစ်နေ့ စားသောက်ဆိုင်မှာ ပြသနာတက်နေတဲ့ သားအဖ၃ယောက်ကို ပြသနာကလွတ်အောင် သူ့လိုငလက်မလေးအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ခက်တာက သူအသွင်ပြောင်းလိုက်ပြီးရင် ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး သူတို့အိမ်ရှေ့မှာ သူကျောက်ရုပ်ထုကြီးအသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ ရုပ်ထုကြီးဟာ လမ်းပိတ်မှုကို ဖြစ်နေစေတဲ့အတွက် အစိုးရဟာ ဖျက်ဆီးဖို့လုပ်နေပါတယ် အဲ့လိုလုပ်ရပ်ကို အချိန်မှီတားဆီးနိုင်ဖို့ ဘယ်လို စွန့်စားခန်းတွေဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်မြုးကားလေးထဲမှာ ကြည့်ကြရအောင်ဗျာ
Secretary 2002 (18+) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်လမ်းက 18+ Erotic ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ရှားရှားပါးပါး IMDB Rating : 7.5 အထိ ရှိခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်ဇာတ်လမ်းထဲမှာ Lee Holloway ဆိုတဲ့ အလုပ်ရှာနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦး၏ဘဝဇာတ်ကြောင်း ကို အခြေပြုရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် သူမဟာ မိဘနှစ်ပါးရဲ့လက်အောက်မှာ ကြီးပြင်းရသူဖြစ်သော်လည်း အဖေဖြစ်သူ နဲ့အမေဖြစ်သူ တို့ရဲ့ ကတောက်ကဆ ရန်ပွဲများအကြား စိတ်အားငယ်နေရသူဖြစ်ပါတယ် ဒီကြားထဲ သူ့အစ်မဖြစ်သူက လက်ထပ်သွားတော့ အတော်လေးအထီးကျန်နေပါတယ် သူမမှာ Peter ဆိုတဲ့ ချစ်သူလည်းရှိပါတယ် သူမဟာ ဒီလိုနဲ့ပဲ ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာဘဝကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ E.Edward Grey ဆိုတဲ့ ရှေ့နေ့တစ်ဦးဆီမှာ အတွင်းရေးမှူးအနေနဲ့ အလုပ်ဝင်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ် ထိုရှေ့နေဖြစ်သူမှာ Lee ရဲ့ အလုပ်ခွင်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသော မဖြစ်စလောက်အမှားများကို မရမက ထောက်ပြပီး အပြစ်ပေးဖို့ပဲချောင်းနေပါတယ် အပြစ်ပေးသည်ဆိုမှာလည်း ရိုးရိုးမဟုတ် ရာဂစိတ်ထန်စေသော အပြုအမူများဖြင့် အပြစ်ပေးလေသည် ထိုသို့ အပြစ်ပေးပါများလာတော့ Lee ကလည်း ဘိန်းစွဲသလို ရဂစိတ်ပြင်းပြလာပြီး အမှားတွေပိုလုပ်လာပါတော့တယ်
ဒီလိုနဲ့ Lee တစ်ယောက် Grey ရဲ့ လိင်ကျေးကျွန်သာသာ အတွင်းရေးမှူး ရာထူးနဲ့ပဲ မွေ့ပျော်မှာလား ရုန်းထွက်မှာလားဆိုတာ ဆက်လက် ကြည့်ရျှုပေးပါ
Translated & Review by Aung Sid Thway
Small size ( 450 mb ) Read more »
The Fast and the Fierce ( 2017 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဗုံးထောင်ထားခဲ့ပီး လေယာဉ်ကအမြင့်ပေ ၈၀ဝ အောက်
Large size ( 600 mb )
In Time 2011 Thriller / Action (Rated – R , Contains some adult material) အဆိုတော်ကြီး Justin Timberlake ရဲ့ သီဆိုထားတဲ့ Troll (2016) ဇာတ်ဝင်သီချင်း True Color ကို နားထောင်ပြီး နောက် သူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို သတိရမိပြီး In Time 2011 ကို တစ်ကြော့ပြန်ကြည့်ခဲ့မိပါတယ်။ 2011 ခုနှစ်ဇာတ်ကားဖြစ်ပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အောင်မြင်ခဲ့သလိုပဲ.. အခုပြန်ကြည့်မိတော့လည်း ရိုးမသွားပါဘူး။
လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ကွာဟမှုအဆမတန်ကြီးမြင့်နေခြင်းကို တစ်ိတ်တစ်ဒေသ မီးမောင်းထိုးပြနေသလိုဖြစ်တာကြောင့် မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေ ကြည့်နိုင်အောင်လို့ ပြန်ညွှန်းပါရစေခင်ဗျာ..
ဇာတ်အိမ်ကို 2169 ခုနှစ်မှာ အခြေတည်ထားပြီး သိပ္ပံပညာအလွန်ထွန်းကားနေပြီဖြစ်တာကြောင့် လူတွေဟာ မျိုးရိုးဗီဇကို ပြောင်းလဲပြီး လူတွေရဲ့ ရုပ်ရည်ကို အသက်(၂၅)နှစ်အရွယ်ရဲ့ ရုပ်ရည်မှာတင် ရပ်တန့်ထားပြီး အိုမင်းခြင်းကို တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မသေတော့ဘူးလားဆိုတော့ သေတတ်ပါတယ်။ ဒါဆို လူ့သက်တမ်းဘယ်လောက်မှာ သေမလဲဆိုတော့ အချိန်ကို အကန့်အသတ်မရှိ ဆွဲဆန့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကို လူတိုင်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ အဓိက ကတော့ အချိန်ကို ဘယ်လိုဆွဲဆန့်ထားမယ်ဆိုတာပါပဲ..
2169 ခုနှစ် လူသားတိုင်းရဲ့ လက်ဖျံမှာ Digital Clock တစ်လုံးဆီရှိကြပါတယ်။ အဲဒီ Digital Clock မှာ နာရီ၊ မိနစ်၊ စက္ကန့်တွေသာမက ရက်၊ လ၊ နှစ် တွေအပြင် ဆယ်စုနှစ်၊ ရာစုနှစ် တွေပါ ညွှန်ပြထားပါတယ်။ လူတိုင်းက အသက်(၂၅)နှစ်က စလို့ အချိန်(၁) နှစ်ကို အရင်းအနှီးအနေနဲ့ လက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပြီး အချိန်ကို တိုးပွားအောင်လုပ်မလား .. ဒါမှမဟုတ် အချိန် လျော့ကျလာပြီးနောက်ဆုံးမှာ သုညမှတ်ရောက်ကာ အသက်သေသွားမလားဆိုတာ.. ကိုယ့်အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ငွေကြေးဆိုတာလည်းမရှိတော့ပဲ.. အချိန်ကိုသာ ငွေကြေးအဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အချိန်တွေကို လွှဲပြောင်းပေးလို့ရပြီး လုပ်အားခပေးချေခြင်း၊ မီတာခ၊ ယဉ်စီးခ ၊ အစားအသောက် ၊ အနေအထိုင် အစ လောင်းကစား နဲ့ ဇိမ်ခံပစ္စည်းအဆုံး အချိန်နဲ့ သာ အသုံးပြုပေးချေကြပါတယ်။
အချိန်မကုန်ရင် အသက်မသေတော့ဘူးလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ ယနေ့ခေတ်လူသားတွေလိုပဲ ထိခိုက်နာကျင် ဒဏ်ရာရနိုင်ပြီး သေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သက်တမ်းအများကြီးရရှိနိုင်သော်ငြားလည်း မအိုနိုင်ပေးမဲ့ နာတတ် သေတတ်ပါတယ်။
ယနေ့ နယ်မြေဒေသပိုင်းခြားပုံနဲ့ မတူညီတာကတော့ .. 2169 ခုနှစ်မှာ.. နယ်မြေဒေသကို Time Zone လို့ ခေါ်ဝေါ်ပြီး (၂) ခုသာ ပိုင်းခြားထားပါတယ်။ Dayton လို့ခေါ်တဲ့ လူဆင်းရဲတွေ နေထိုင်တဲ့ Time Zone နဲ့ New Greenwich လို့ ခေါ်တဲ့ လူချမ်းသာတွေနေထိုင်တဲ့ Time Zone ဆိုပြီး (၂) ခုသာရှိပါတယ်။
Dayton လို့ခေါ်တဲ့ ဆင်းရဲ့တဲ့အလုပ်သမားထုကြီးနေထိုင်တဲ့အရပ်မှာ.. လူတော်တော်များများမှာ (၂၄)နာရီအောက်အချိန်သက်တမ်းသာကျန်ရှိပြီး.. နေရာတိုင်းမှာ အချိန်ကုန်သွားလို့ လဲကျသေဆုံးသွားတဲ့ သူတွေကို နေ့စဉ်မြင်တွေ့ရမှာပါ… အဲဒီအရပ်က .. တကယ်တော့ လူ့ငရဲပါပဲ.. အစဉ်အမြဲကြီးမြင့်နေတဲ့ နေထိုင်မှုစရိတ်တွေကို အလျဉ်မှီအောင် ရှာဖွေရုန်းကန်ရင်းနဲ့ ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်မှုတွေ.. အဆမတန်ညဉ်းဆဲခိုင်းစေမှုတွေကြားမှာ… လူတွေဟာ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာတောင် ဘာမှန်းမသိကြတော့ပါဘူး. နေ့တဒူဝ ပြေးလွှားရုန်းကန်ရင်းနဲ့ နိမ့်ကျသည်ထက်နိမ့်ကျပြီး ဆုတ်ယုတ်သည်ထက် ဆုတ်ယုတ်လာကြပါတယ်။
New Greenwich ဆိုတာကတော့ လူချမ်းသာတွေနေထိုင်တဲ့ အရပ်ဆိုတဲ့အတိုင်း လူတိုင်းမှာ အချိန်ကို ရာစုနှစ်များစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး နာကျင်ထိခိုက်မှုကို အလွန်အမင်းကြောက်ရွံ့တဲ့ သူတွေပါပဲ.. လူကုန်ထံတွေဖြစ်သည့်အလျောက် .. မသေခင်ကတည်းက .. နတ်စည်းစိမ်ခံစား စံစားနေကြရတဲ့ သူတွေပေါ့.
ဇာတ်လမ်းအားလုံးရဲ့ အစက Dayton မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။
အသက်(၂၈)နှစ်အရွယ် စက်ရုံလုပ်သား Will Salas (Justin Timberlake) က မိခင်ဖြစ်သူကို စိတ်ချမ်းသာဖို့ အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ သားအလိမ္မာလေးတစ်ယောက်ပါ။
နေ့စဉ်ပုံမှန်အလုပ်သွားပြီး အလုပ်ကအပြန် အရက်စွဲနေတဲ့ သူငယ်ချင်း ကို Bar မှာ သွားခေါ်ရင်းက မထင်မှတ်ပဲ အရက်မှုးနေတဲ့ 105နှစ်အရွယ် Henry Hamilton ကို Minutemen (အချိန်ဓားပြ)တွေ ရဲ့ လုယက်မှုကနေ ကယ်တင်လိုက်ပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ Henry ရဲ့ ငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့ သူ့ ဘဝအကြောင်းကို နားထောင်ရင်း New Greenwich က လူချမ်းသာတွေရဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ်အမြတ်ထုတ်မှုတွေကို စဉ်းစားမိလာပါတယ်။ မနက်ခင်းမှာတော့ Henry က သူ့ရဲ့ အချိန်သက်တမ်းအားလုံးကို Will ကို ပေးခဲ့ပြီး “Don’t waste my time” ဆိုတဲ့ Message လေးထားခဲ့ပြီး သူ့ဘဝကို နိဂုံးချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Will ရဲ့ အိမ်အပြန်လမ်းက… လေးလံတဲ့ ခြေလှန်းတွေနဲ့ မယုံနိုင်စရာ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပါ…
ရုတ်တရက် ယာဉ်စီးခ ကြီးမြင့်သွားမှုကြောင့် Will ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူက အချိန်မီ အိမ်ပြန်မရောက်ခဲ့ပဲ.. ဆင်းရဲခြင်းရောဂါကြောင့် လမ်းမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်.. မိခင်ဖြစ်သူကို မျက်စိရှေ့မှာတင် ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ့် Will တစ်ယောက် နာကြဉ်းချက်တွေနဲ့ မိခင်ဖြစ်သူအရမ်းကို သွားချင်ခဲ့တဲ့ New Greenwich ကို ခြေဆန့်ခဲ့ပါတော့တယ်…
အဲဒီမှာပဲ New Greenwich ရဲ့ လူကုံထံ ထိပ်ထိပ်ကြဲအသိုင်းအဝိုင်းက သမီးချောလေး Sylvia Weis (Amanda Seyfried) နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Henry ရဲ့ သေဆုံးမှုကို CCTV မှတ်တမ်းကတဆင့် မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ အချိန်ရဲအရာရှိ က Will ရဲ့ လက်ချက်လို့ ထင်မြင်ပြီး Will ရဲ့ နောက်ကို လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့သလို အချိန်ဓားပြ ကလည်း Will ရလိုက်တဲ့ Century တစ်ခုစာကို ရယူဖို့အတွက် Will နောက်ကို လိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
အခက်အခဲတွေကြားက Will နဲ့ သူဌေးသမီးလေး Sylvia တို့ အချစ်ရေးက ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမလဲ…
Will ကရော အရာရှိနဲ့ ဓားပြတို့လက်ထဲက ဘယ်လို လွတ်မြောက်နိုင်မလဲ…
သူရရှိခဲ့တဲ့ Henry ရဲ့ အမွေ ကိုရော အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ပါ့မလား..
ဆင်းရဲ.. ချမ်းသာ ကွာဟမှုကရော ပိုမိုဆိုးရွားလာမလား.. ဆိုတာကိုတော့ စိတ်ဝင်စားရင် ဇာတ်လမ်းကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုပါလို့ပဲ ပြောကြားပါရစေ။
ဇာတ်လမ်းက သိပ္ပံခေတ်လွန်ဇာတ်လမ်းဖြစ်တာကြောင့် တစ်ချို့ Action တွေကလည်း Reality နဲ့ ကင်းကွာတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့ မိုက်ရူးရဲဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေရယ် Romance ဆန်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ နဲ့ ဇာတ်လမ်းကို အဆုံးထိဆက်ကြည့်ချင်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ အခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ လူကုန်ထံတွေရဲ့ အတ္တလောဘတွေကို လှောင်ပြောင်သရော်ရိုက်ကူးထားတာကြောင့် ဇာတ်လမ်းက ဆန်းပေမယ့် ကျောရိုးကတော့ လက်တွေ့ဆန်လွန်းပါတယ်။
ကြည့်ကို ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားလို့ မညွှန်းနိုင်ပေမယ့် ကြည့်လို့လဲ အချိန်ဖြုန်းတီးရာရောက်မယ့်ကားတစ်ကားတော့မဟုတ်ပါဘူး..
အဲဒီကားမှာ အကြိုက်ဆုံး Dialogue (၂) ခုကတော့ -
မင်းသမီး >>> ငါတို့ ဘာရလိုက်လဲ ? မင်းသား >>> (၁) ရက်။ (၁)ရက်ဆိုတာ မင်းအများကြီးအသုံးချလို့ရပါတယ်။ ………………………
မင်းသမီးအဖေ >>> သမီးက အဖေဆီက ခိုးယူတော့မယ်ပေါ့… မင်းသမီး >>> ခိုးယူထားပြီးသားပစ္စည်းဖြစ်ရင်တော့ အခိုးခံရတယ်လို့ ခေါ်လို့ရပါမလား ?
တခြား စိတ်ဝင်စားစရာ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ.. တွေးတောစရာ Dialogue တွေနဲ့ မို့ အဆင်ပြေမယ်ဆို ကြည့်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ. Translated & Encoded by Aung Myint Oo Review by Nucleon
Lagre size ( 850 mb )
Small size ( 450 mb )
Fight for My Way(22017)Seriesမြန်​မာစာတန်းထိုး
မှန်ကန်တဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံမရှိပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်လား
Ko Dong Man ဟာ ကျော်ကြားတဲ့ တိုက်ကွမ်ဒိုကစားသမားဖြစ်ဖို့ အချိန်တိုင်းစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ သူ့စိတ်မပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာလုပ်နေရပါတယ်။ သူနဲ့အမြဲ ကတောက်ကဆနဲ့ အငြင်းပွားလေ့ရှိတဲ့သူငယ်ချင်း Choi Ae Ra ကတော့ တီဗီသတင်းကြေငြာသူဖြစ်ချင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း ကုန်တိုက်တစ်ခုရဲ့ သတင်းအချက်အလက်ကောင်တာမှာလုပ်နေရပါတယ်။ သူငယ်ချင်း Kim Joo Man နဲ့ Baek Seol Hee တို့ တွဲခဲ့တာ ၆ နှစ်ကြာခဲ့ပေမယ့် အခုသူတို့ဆက်ဆံရေးက အန္တရာယ်ကျလုနီးပါးဖြစ်နေပါတယ်။
"Third rate" ဆိုတဲ့ အရည်အသွေးတွေရှိကြတဲ့ ဒီသူငယ်ချင်း ၄ ယောက် သူတို့အိပ်မက်အတိုင်း လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါ့မလား။
Fight My Way ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲကို KBS2 ရုပ်သံလိုင်းကထုတ်လွှင့်ပြီး အပိုင်း ၁၆ ပိုင်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Translated by Phyo Thant, Winnie Ngoon
Extortion ( 2017 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
IMDb rating 6.4 အထိရထားတဲ့ 2017 နစ်ထွက် horror ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ
Kevin Riley ဟာအောင်မြင်တဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါ
သူ့မှာ Julie ဆိုတဲ့မိန်းမနဲ့ ၆ နစ်အရွယ် သားတစ်ယောက်
ရှိပါတယ် သူတို့ဟာ ဘဟားမားကျွန်း ဘက်ကို
အားရက်လပ်အပန်းဖြေခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ် Kevin ဟာ
Review & Enconded by Lwin Naung
Ong-Bak3( 2010 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
အခုဒီကားလေးကတော့ Ong-Bak3ပါ ထုံးစံအတိုင်း
မရှိပါဘူး ဒီကားကတော့ 1431 ခုနစ်ကိုအခြေခံထားတာပါ
Translate & Encoded by Aung Myint Oo
Review by Lwin Naung Quality Blueray
Large size ( 1.1 G )
Saw 1, 2, 3,4( မြန်မာစာတန်းထိုး )
သူ့နာမည်က ဂျွန် ခရမ်မာ ။
သူ့ကို ရဲတွေနဲ့ သတင်းစာတွေက Jigsaw လို့ ခေါ်တယ် ။ ဂျစ်ဆော ဆိုတာ ဥာဏ်စမ်း ရုပ်ဆက် ကစားနည်း တစ်ခု ။ ဂျွန် ခရမ်မာ ဟာ သူ့သားကောင်တွေကို သတ်ပြီးရင် ဂျစ်ဆောလို့ ခေါ်တဲ့ ဥာဏ်စမ်း ရုပ်ဆက် ကစားနည်းလို သေသူ ရဲ့ အရေပြား အပိုင်းအစလေးတွေကို ခွာယူလေ့ရှိတယ် ။
ဂျစ်ဆောလို့ ခေါ်တဲ့ ဂျွန် ခရမ်မာက ပညာတတ် အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် ။ ဂျစ်ဆောမှာ ဖလော်ဆော်ဖီ တစ်ခု ရှိတယ် ။ သူ့ ဖလော်ဆော်ဖီကတော့ " ကိုယ့် ဘဝကို တန်ဖိုး မထားသူဟာ အသက်ရှင်ဖို့ မထိုက်တန်ဘူး" တဲ့ ။ တကယ်တော့ ဂျစ်ဆောဟာ လူသတ်သမား မဟုတ်ဘူး ။
မိမိဘဝ အသက်ရှင်သန်ဖို့ အတွက် မိမိကိုယ်ခန္ဓာက ဘာတွေကို ဘယ်လောက် အဆုံးရှုံးခံနိုင်မလဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်တာ ။ လူတွေဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးဆိုး ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ယုတ်မာမာ နောက်ဆုံး မိမိ အသက်ကိုတော့ နှမြောတတ်တာပဲ ။ လူတွေဟာ သေခြင်းတရားနဲ့ ရင်ဆိုင်လာရရင် လူတွေရဲ့ စိတ်ဟာ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ပြောင်းလဲ သွားတတ်တယ် ။ ဂျစ်ဆောရဲ့ဖလော်ဆော်ဖီတွေဟာ သိပ်ကောင်းပေမယ့် သွေသံရဲရဲ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကြောင့် အညွှန်းကို ဒီထက် ချဲ့ကားရေးပြလို့ မဖြစ်တော့ဘူး ။ အဲဒိတော့ ခင်ဗျားတို့ ဘာသာ ယူတတ်ရင် ဆက်ကြည့်ပေတော့ .... ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေ လူသတ်မှုတွေ နဲ့ အစမှ အဆုံးထိတိုင် ပြည့်နေလို့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဇာတ်ကားလို့ သတ်မှတ်လို့ ရပေမယ့် ဂျစ်ဆောရဲ့ ဒဿနတွေကို ခင်ဗျားတို့ သဘောပေါက်ခဲ့ရင် ကျုပ် ဘာသာပြန်ပေးရတာ အချိန်ကုန်ရကျိုး ပင်ပန်းရကျိုး တန်ပါတယ်ဗျာလို့ ပြောချင်ပါတယ် ။ Translated & Review by Wai Linn Kyaw
Quality Blueray Saw 1 (Large size 700 mb )
Saw 1 (Small size 400 mb )
Saw2(Large size 700 mb )
Saw2( Small size 380 mb )
Saw3(Large size 900 mb )
Saw3( Small size 490 mb ) Saw4(Large size 700 mb )
Saw4( Small size 400 mb ) Saw 5
Fist Fight ( 2017 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
2017 ထွက် ဟာသကား အသစ်လေးတစ်ခုကို တင်ဆက်ပေးပါမယ်
အထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဆရာတွေအကြောင်းပါ သူတို့ကို အလုပ်ပြန်ရဖို့ အင်တာဗျူးမဲ့ ကျောင်းနောက်ဆုံးနေ့မှာပေါ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ပုဆိန်နဲ့ရမ်းလို့ အလုပ်ဖြုတ်ခံရတော့မဲ့အချိန်ပေါ့ အခြားဆရာတစ်ယောက်က အဲ့အကြောင်းကို ကျောင်းအုပ်နား အမှန်တိုင်းပြောလိုက်လို့ ဆရာနှစ်ယောက်ကြားမှာ နားလည်မှုလွဲတာလေးတွေ ဖြစ်လာပါတယ် ကျောင်းချိန်ပြီးရင် လက်သီးချင်းထိုးဖို့ စိန်ခေါ်ခံရပါတယ် ဖြစ်ချင်တော့ အလုပ်အင်တာဗျူးရော သမီးရဲ့စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲရော ရှိသေးတဲ့အတွက် အဲ့စိန်ခေါ်ပွဲကို မဖြစ်အောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ တားဆီးပါတော့တယ် ဒါပေမဲ့လဲ အလွဲတွေဖြစ်လာပြီး ဘယ်နည်းဘယ်ဟန်နဲ့ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကို ရယ်မောစွာကြည့်ရမှာပါ
Budget 25သန်းပဲအသုံးပြုထားပြီး ဝင်ငွေ၂ဆကျော်ကျော်ပြန်ရထားပါတယ် ပရိသတ်အကြိုက် လူမည်းမင်းသား Ice Cube ပြီးရင် Charlie Day , ဟာသမင်းသား Tracy Morganနဲ့ Jillian Bellတို့လို ထိပ်တန်းဟာသသရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်ထားတာကြောင့် မရပ်တန်းရီပြီးကြည့်ရမဲ့ ဟာသကားလေးတစ်ကားပါ
Quality Blueray Large size ( 650 mb )
Small size ( 350 mb)
Black Site Delta (2017 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
အဲ့အတွက်နဲ့သူ့ကို black site လို့ခေါ်တဲ့ထောင်ကိုပို့
လိုက်ပါတယ် အဲ့ထောင်ကတော့ အစိုးရကပြည်သူတွေကို
Translated by Lin Thura
Review and Encoded by Lwin Naung
Johnny English Reborn (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
IMDb rating 603
Mr.Bean ရဲ့ Johnny English Reborn ဆိုရင်လူတိုင်း
သိပီးသားဖြစ်မှာဘဲ James Bond ဇာတ်ကားတွေကို
ပထမဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ Johnny English ကားလေးရဲ့
အဆက်ဖြစ်ပါတယ် အစပိုင်းမှာတော့ Johnny English
ထားပါတယ် နောက်မှာတော့ MI7 ရဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းကို
Translated and Encoded by Aung Myint Oo
Review by Lwin Naung
Large size ( 700mb )Small size ( 400mb )
မှတ်ချက်။ ။ 009-1 ဟာ ခေတ်ကြိုသိပ္ပံကားဖြစ်တဲ့အတွက် 18+အခန်းတွေနဲနဲပါသလို
၊ တိုက်ခိုက်တဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကလည်း သွေးသံတရဲရဲနဲ့မို့
အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ လူငယ်လေးတွေ မကြည့်သင့်ပါဘူးရှင့် :) ဒီဇာတ်ကားကတော့ လာမဲ့အနာဂတ်ကာလမှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ အနောက်ခြမ်းနဲ့အရှေ့ခြမ်းဆိုပြီး အာဏာပြိုင်ရင်း နှစ်
ခြမ်း ကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံကြား
သူလျှိတွေ အသီးသီးလွှတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြတဲ့ ခေတ်ကြိုသိပ္ပံ သူလျှိုဇာတ်ကားလေးပါ။
သူလျှိုမလေး Mirine (009-1) ဟာ ကမ္ဘာအနောက်ခြမ်းက
သူသားတစ်ဝက် စက်ရုပ်တစ်ဝက် အေးဂျင့်တစ်ယောက်ပါ။ သူမဟာ
အနောက်ခြမ်းနဲ့ အရှေ့ခြမ်းကြားက နယ်နိမိတ်နိုင်ငံ
ဖြစ်တဲ့ J နိုင်ငံထဲကို ခိုးဝင်ပြီးတော့ လူ့အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း
တွေကို မှောင်ခိုရောင်းချနေတဲ့ ဂိုဏ်းကို စုံစမ်းရတဲ့ တာဝန်ကို ပေးအပ်ခြင်းခံရပါတယ်။ သူမဟာ မှောင်ခိုဂိုဏ်းကို စုံစမ်းရင်း
ကမ္ဘာ့အရှေ့ခြမ်းဆီက ဒုက္ခသည် ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ကောင်လေးကို သူမက Chris လို့ နာမည်ပေးခဲ့ပြီး
ကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ သူမတစ်ပိုင်းတစ်စ မှတ်မိနေသး
တဲ့ သူမရဲ့ မိသားစုအကြောင်းကို သိချင်စိတ်တွေ များလာခဲ့တယ်။ သူမဟာ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မိသားစုနဲ့ အခွဲခံခဲ့ရပြီး သူလျှိုအဖြစ် လေ့ကျင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဖျက်ခံခဲ့ရတဲ့ သူမမှတ်ဥာဏ်တွေအတွက် သူမအတိတ်ကို ပြန်လည်ရှာဖွေဖို့ ကြိုးစားရင်း အခက်အခဲအမျိုးမျိုး
ပြောင်းလဲခြင်းအမျိုးမျိုးကို အန်တုကာ ပျက်ဆီးနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကို
သူမ ကယ်တင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ သူမအတိတ်မှတ်ဥာဏ်အတွက် သူမရှင်သန်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးအတွက် ဘာတွေဘယ်လို တိုက်ခိုက်အန်တုရင်း ဘယ်လို ဆက်လက်ရှင်သန်သွားမယ်ဆိုတာကို
ကိုယ်တိုင် ကြည့်ကြည့်မှ သိမှာပါနော်။
လူသားစက်ရုပ်ကားဖြစ်ပေမယ့် မိသားစုမေတ္တာ၊ သူငယ်ချင်းမေတ္တာ
တွေနဲ့ ဇာတ်အိမ် တည်ထားတာမို့ ပရိသတ်ရင်ကို ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။
Translated & Review by War So
Large size ( 600 mb)
Gold Channel. Powered by Blogger.
Fighter of the Destiny 2017 ( မြန်မာစာတန်းထိုး)
Add caption ဒီ fod ဆိုတဲ့ကားလေးကိုတော့လူတိုင်းသိကျမှာပါ အခုတလောနာမည်ကြီးနေတဲ့ တရုတ်သိုင်းကားလေးပါ လွန်ခဲ့တဲ့နစ်ပေါင်းများစွာကကမ္ဘာပေါ်ကိ...
Ruler: Master of the Mask (2017)Series မြန်မာစာတန်းထိုး
Ruler: Master of the Mask (2017)Series မြန်မာစာတန်းထိုး ဒီဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ဇာတ်အိမ်ကို ၁၈ရာစုနှစ် ဂျိုဆွန်းခေတ်နဲ့ အခြေတည်ထားပါတယ်။ အိမ...
ဒီဇာတ်လမ်းက 18+ Erotic ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ရှားရှားပါးပါး IMDB Rating : 7.5 အထိ ရှိခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်ဇာတ်လမ်းထဲမှာ Lee Hollowa...
Suspicious Partner(2017)Series မြန်​မာစာတန်းထိုး
Suspicious Partner(2017)Series မြန်​မာစာတန်းထိုး ဆွဲဆောင်မှုအားပြင်းတဲ့အပြင် ဉာဏ်လည်းသိပ်ကောင်းလွန်းတဲ့ စုံစမ်းရေးမှူးတစ်ယောက်နဲ...
ဒီကားလေးကတော့ 18+ ဆိုပင်မဲ့ drama ကားလေးပါ IMDb 5.6 တောင်ရထားတာပါ ဒယ်လန် ဟာမိန်းမချင်းနစ်သက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် သူကအမိုးပြင်တဲ့လုပ်ငန်း...
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့အက်ရှင်ကားလေးပါ အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာလေယာဉ်တစ်စီးပေါ်မှာ ဗုံးထောင်ထားခဲ့ပီး လေယာဉ်ကအမြင့်ပေ ၈၀ဝ အောက် ရောက်သွားတာနဲ့ပေါက်က...
My Secret Romance (2017)မြန်​မာစာတန်းထိုး
My Secret Romance [ မြန်မာစာတန်းထိုး ] ဂျယ်ဘုအုပ်စုရဲ့ ဒုတိယမျိုးဆက် အပျော်အပါးမက် ပါတီတွေဆင်နွှဲပြီး ကောင်မလေးတွေကို အပျော်တွဲတတ်တဲ့...
မင်းသားကြီး နီကိုးလပ်​စ်​​ကေ့ခ်ျ​ရဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်​ ​နောက်​ဆုံးထွက်​ ကားသစ်​တစ်​ကားဖြစ်​တဲ့ Vengeance ofalove story ဇာတ်​ကားဟာဆိုရင်​​တော...
မှန်ကန်တဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံမရှိပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်လား Ko Dong Man ဟာ ကျော်ကြားတဲ့ တိုက်...
ဒီနေ့ ရုပ်ရှင်အကြိုကဏ္ဍအတွက်တော့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုကြည့်ရမယ့် အမေရိကန်စိတ်ကူးယဉ် သိပ္ပံဇာတ်ကားသစ်လေး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ ဒန်နီ ယက်အက်...
Ghosthunters on Icy Trails (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး...
In Time 2011 Thriller / Action (Rated – R , Contai...
Vampire Hunter D BloodLust(2000)
The Lego Batman Movie(2017)မြန်မာစာတန်းထိုး
Before I Fall(2017)မြန်​မာစာတန်းထိုး
The Boss Baby(2017)မြန်မာစာတန်းထိုး
Man of Steel(2013)မြန်​မာစာတန်းထိုး
The Invisible Guest(2017) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Beauty and the Beast (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Guardians of the Galaxy Vol.2(2017) မြန်မာစာတန်း...
The Lucky Guy 1998 - မြန်မာစာတန်းထိုး
Shrek : The Collection မြန်​မာစာတန်းထိုး
Amityville Exorcism (2017)မြန်​မာစာတန်းထိုး
The Hunter's Prayer(2017)မြန်​မာစာတန်းထိုး
Alien & Zombie (2017)မြန်​မာစာတန်းထိုး
Ruler: Master of the Mask (2017)Series မြန်မာစာတန်...
xXx: Return of Xander Cage (2017)မြန်​မာစာတန်းထို...
Dangal (သို့မဟုတ်) အောင်မြင်မှုရဲ့ ခရီးကြမ်း(2016)ြ...
Black Sea (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Flying Jatt (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Collector (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
Strip Mahjong:Battle Royale(2012) မြန်မာစာတန်းထိုး...
Rock dog (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Shadow Effect (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Changing Partners(2007)မြန်​မာစာတန်းထိုး 18+
Outlaws And Angels (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Taking Of Tiger Mountain (2014) မြန်မာစာတန်းထိ...
Blood Diamond (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး
A Dark Song (2016)မြန်​မာစာတန်းထိုး
In the Name of Love (2011)မြန်​မာစာတန်းထိုး
Sold (2016) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Popstar; Never Stop Never Stopping(2016)မြန်​မာစာတ...
Air Bound (2016)မြန်မာစာတန်းထိုး
The Toture club(2014) 18+ မြန်​မာစာတန်းထိုး
A Moment To Remember (2004) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Dark Tapes (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Ghost In The Shell (2017)မြန်မာစာတန်းထိုး
Superman Return 2006 မြန်မာစာတန်းထိုး
Sand Castle (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး